မနျစီးတီးကာကှယျမယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျကို ခြဲလျဆီးနညျးပွ တူဟယျလျ ဘယျလို အရယူနိုငျမလဲ – Sports A2Z
Analysis • Article • Other • Premier League
ဒီမေးခှနျးကို အလှယျဆုံး ဖွလေို့ရတဲ့နညျးကတော့ ခြဲလျဆီးအသငျးအနနေဲ့ မနျခကျြစတာစီးတီးအသငျးထကျ သာအောငျလုပျဖို့ တဈနညျးပဲ ရှိတာပါ။ ဒါကို ဆကျစဥျးစားရငျတော့ တဈရာသီလုံးကို ထိနျးကြောငျးသှားရမယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျခရီးရှညျမှာ ၃၈ ပှဲလုံးကို တူဟယျလျ ပထမဆုံး ကစားရတော့မှာပါ။ လူစာရငျးရဲ့ သကျလုံပိုငျးက အဓိကကနြသေလို ကွံ့ခိုငျမှုပိုငျးကို တညျ​ဆောကျပွီး တိုကျစဈက ဂိုးမွူးဖို့ လိုအပျသလို ခံစဈက အရငျရာသီကလို လုံခွုံပွီး ဆကျလကျမာကြောဖို့ ဆောငျရှကျသှားရမှာက အဓိကအခကျြတှေ ဖွဈပါတယျ။
တီမို ဗာနာကို ကောငျးကောငျးမှေးရမယျ
ပွီးခဲ့တဲ့နှမှော RB လိုကျပျဇျအသငျးကနေ စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြမွဆေီ ပေါငျ ၄၅ သနျးနဲ့ ပွောငျးရှလေ့ာခဲ့ပမေယျ့ တာထှကျပရီးမီးယားလိဂျရာသီမှာ ရုနျးကနျခဲ့ရပွီး ပွိုငျပှဲစုံ ၁၂ ဂိုးသာ သှငျးယူနိုငျခဲ့သလို အသငျးဖျောတှအေတှကျ ၁၅ ဂိုးသာ ဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ကမ်ဘာ့အဆငျ့တိုကျစဈမှူး မပီသဘူးဆိုတဲ့ သိမျးကြုံးဝဖေနျမှုတှကေို ဗာနာက လကျရှိမှာ ခံယူခဲ့ရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အသကျ ၂၅ နှဈသားဟာ ခြဲလျဆီးရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဖလားအောငျမွငျမှုအတှကျ အဓိကကတြဲ့ အခနျးကဏ်ဍအထိရောကျအောငျ အသငျးကို မောငျးနှငျနိုငျခဲ့တယျ။ နညျးပွ သောမတျဈ တူဟယျလျကတော့ ငယျရှယျနုနယျသေးပွီး တိုးတကျဖို့ အလားအလာကောငျးတှရှေိနတေဲ့ တီမို ဗာနာကို ဘယျလို ပွုပွငျပွောငျးလဲရမလဲဆိုတာကို ကောငျး​ကောငျးသိရှိထားကွောငျး ဆိုထားခဲ့ဖူးတာပါ။
သူ့အနနေဲ့ ဂိုးမြားမြားသှငျးပွီး မွနျနှုနျးမွငျ့၊ ကွံ့ခိုငျမှု အသားပေးတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ မွနျမွနျလညျပတျအောငျ မောငျးပေးနကွေောငျး ဆိုခဲ့တာကတော့ ဗာနာကို ဂိုးသှငျးနိုငျအောငျ ယုံကွညျမှုပေးသှားမယျလို့ ထောကျခံခကျြပေးခဲ့ပွီး အဲဒီလို ကတိပေးထားတဲ့အတိုငျး တကယျမှေးမွူသှားနိုငျဖို့ လိုအပျနတောဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ဗဟိုခံစဈမှုးတဈယောကျ ဝယျရမယျ
သောမတျဈ တူဟယျလျ ကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ ၆ လ သကျတမျးအတှငျးမှာ ခြဲလျဆီးခံစဈပိုငျးက အံ့မခနျးတိုးတကျခဲ့တာက မဖွဈမနေ အသိအမှတျပွုရပါမယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီရာသီမှာတော့ ကွံ့ခိုငျမှုအရ ပွဿနာရှိလာနိုငျတဲ့ အသကျ ၃၇ နှဈသားကွီး သီယာဂို ဆေးလျဗားနရောကို ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ဗဟိုနောကျခံလူတဈဦးနဲ့ ဖွညျ့တငျးဖို့ အဓိက လိုအပျနပေါတယျ။
ဆီဗီလာကစားသမား ဂြူးလျ ကှနျဒီကို ပေါငျသနျး ၅၀ နဲ့ သဘောတူညီမှုရယူဖို့ ​ကွိုးစားနတောက အခြိနျမနှောငျးခငျ ကိစ်စအဝဝ ပွီးစီးဖို့ လိုနပွေီး ရာသီသဈ အစီအစဥျမှာ အမွနျဆုံး ပူးပေါငျးခိုငျးဖို့ တှနျးယူရပါဦးမယျ။ ဟာလနျးကို လိုကျနရေလို့ လမျးပြောကျပွီး ဒီအပွောငျးအရှဖွေ့ဈမလာရငျတော့ တူဟယျလျတဈယောကျ ရငျခံစရာ အခွအေနတေခြို့ကို မလှဲမသှေ ကွုံတှရေ့လိမျ့ဆိုတာ သိရှိထားပွီးသား ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
မလိုတဲ့ ကစားသမားတှေ ရှငျးထုတျရမယျ
ဒီစာရငျးမှာတော့ အသငျးမှာ ပှဲမထှကျတော့တာ ၃ နှဈလောကျရှိပွီဖွဈတဲ့ ဒနျနီ ဒရငျ့ချဝါးတား၊ တီးမူး ဘာကာယိုကို၊ ဒါဗီဒေး ဇကျပါကျောစတာတို့နဲ့အတူ လူးဝစ်စ ဘကော၊ မတျ မီယာ့ဇျဂါ၊ ဂြိတျချ ကလာ့ချ-ဆျောလျတာတို့ကို ရှငျးထုတျရငျး လစာဖောငျးပှမှုကို လြှော့ခပြွီး လူသဈဝယျဖို့ ငှရှောသှားရမှာဖွဈသလို အငှားကနေ ပွနျပူးပေါငျးလာတဲ့ ရော့ဈ ဘာကလီနဲ့ ရူဘငျ လော့ဖျတပျဈခြိချတို့ကို နရောပေးသှားဖို့ ရှိမလားဆိုတာတော့ တဈခကျြကွညျ့ရဦးမှာပါ။
တူဟယျလျ ဖွရှေငျးဖို့ ကနျြနသေေးတာက တိုကျစဈပုစ်ဆာပါ။ အဆုံးသတျပိုငျး ညံ့ဖငျြးလှနျးတာကို အဖွရှောရပါဦးမယျ။ ခိုငျဟာဗတျဇျက ဂိုးသှငျးခွရေလာပွီမို့ စိတျအေးစရာတဈခု ရှိလာပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပငျနယျတီ ၇ ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ ဂြျောဂငျြဟိုက ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးဖွဈခဲ့တာကတော့ လကျခံနိုငျဖို့ ခကျခဲပါတယျ။ အထောငျတိုကျစဈမှူးသဈကို မဖွဈမနေ ဝယျယူရမှာဖွဈသလို လကျရှိမှာ ဟာလနျးနဲ့ သတငျးငွိမျသှားပွီး ရိုမီလူ လူကာကူးနဲ့ သတငျးမှေးလာတာကိုတော့ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့သှားရပါမယျ။
ဘယျလိုစိနျချေါမှာတဲ့လဲ? ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက တူဟယျလျက ပကျပျ ဂှါဒီယိုလာကို ၃ ပှဲစလုံး အရှကျခှဲပွီး ဖွိုခပြွခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ စီးတီးတို့လကျထဲက ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို ပွနျလုဖို့ကတော့ ဂကျြချ ဂရီးလဈရျှနဲ့ ဟာရီကိနျးတို့ ပူးပေါငျးလာနိုငျတဲ့ လူအငျအားအရ အတျောလေး ခကျခဲသှားနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးအခြိနျမှာ လကျရှိ ခြဲလျဆီး လူစာရငျးက ခွတေဈလှမျး နောကျကနြတေယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
သူ့အနနေဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ရယူအပွီးမှာ မနျစီးတီးနဲ့ ခွအေဆငျ့အတနျးခငျြး ကှာဟမှုကို အမီလိုကျနိုငျဖို့ ကွိုးစားနခြေိနျမှာ ဗာနာ+ခိုငျဟာဗတျဇျ ဂြာမနျအတှဲက ခနျြပီယံလိဂျဖလားနဲ့ အရှိနျကောငျးကို ရနပေမေယျ့ တဖကျမှာ မနျယူနိုကျတကျ၊ လီဗာပူးလျတို့ကလညျး အပွိုငျအဆိုငျ အားထညျ့လာမှာဖွဈလို့ အဘေရာဟမျကို ဘယျလိုနညျးနဲ့ အသုံးခသြှားနိုငျမလဲ ဒါမှမဟုတျ တူဟယျလျအနနေဲ့ မာရီနာတို့ရဲ့ လူသဈချေါယူမှုကိုသာ စိတျရှညျရှညျနဲ့ ဆကျလကျစောငျ့မြှျောသှားတော့မယျလို့ အတှေးပှားမိကွောငျး ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
ZAWGYI: ဒီမေးခွန်းကို အလွယ်ဆုံး ဖြေလို့ရတဲ့နည်းကတော့ ချဲလ်ဆီးအသင်းအနေနဲ့ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းထက် သာအောင်လုပ်ဖို့ တစ်နည်းပဲ ရှိတာပါ။ ဒါကို ဆက်စဉ်းစားရင်တော့ တစ်ရာသီလုံးကို ထိန်းကျောင်းသွားရမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်ခရီးရှည်မှာ ၃၈ ပွဲလုံးကို တူဟယ်လ် ပထမဆုံး ကစားရတော့မှာပါ။ လူစာရင်းရဲ့ သက်လုံပိုင်းက အဓိကကျနေသလို ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းကို တည်​ဆောက်ပြီး တိုက်စစ်က ဂိုးမြူးဖို့ လိုအပ်သလို ခံစစ်က အရင်ရာသီကလို လုံခြုံပြီး ဆက်လက်မာကျောဖို့ ဆောင်ရွက်သွားရမှာက အဓိကအချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
တီမို ဗာနာကို ကောင်းကောင်းမွေးရမယ်
ပြီးခဲ့တဲ့နွေမှာ RB လိုက်ပ်ဇ်အသင်းကနေ စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျမြေဆီ ပေါင် ၄၅ သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပေမယ့် တာထွက်ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီမှာ ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး ပြိုင်ပွဲစုံ ၁၂ ဂိုးသာ သွင်းယူနိုင်ခဲ့သလို အသင်းဖော်တွေအတွက် ၁၅ ဂိုးသာ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်တိုက်စစ်မှူး မပီသဘူးဆိုတဲ့ သိမ်းကျုံးဝေဖန်မှုတွေကို ဗာနာက လက်ရှိမှာ ခံယူခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အသက် ၂၅ နှစ်သားဟာ ချဲလ်ဆီးရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားအောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကကျတဲ့ အခန်းကဏ္ဍအထိရောက်အောင် အသင်းကို မောင်းနှင်နိုင်ခဲ့တယ်။ နည်းပြ သောမတ်စ် တူဟယ်လ်ကတော့ ငယ်ရွယ်နုနယ်သေးပြီး တိုးတက်ဖို့ အလားအလာကောင်းတွေရှိနေတဲ့ တီမို ဗာနာကို ဘယ်လို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမလဲဆိုတာကို ကောင်း​ကောင်းသိရှိထားကြောင်း ဆိုထားခဲ့ဖူးတာပါ။
သူ့အနေနဲ့ ဂိုးများများသွင်းပြီး မြန်နှုန်းမြင့်၊ ကြံ့ခိုင်မှုအသားပေးတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ မြန်မြန်လည်ပတ်အောင် မောင်းပေးနေကြောင်း ဆိုခဲ့တာကတော့ ဗာနာကို ဂိုးသွင်းနိုင်အောင် ယုံကြည်မှုပေးသွားမယ်လို့ ထောက်ခံချက်ပေးခဲ့ပြီး အဲဒီလို ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း တကယ်မွေးမြူသွားနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အဆင့် ဗဟိုခံစစ်မှုးတစ်ယောက် ဝယ်ရမယ်
သောမတ်စ် တူဟယ်လ် ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ၆ လ သက်တမ်းအတွင်းမှာ ချဲလ်ဆီးခံစစ်ပိုင်းက အံ့မခန်းတိုးတက်ခဲ့တာက မဖြစ်မနေ အသိအမှတ်ပြုရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရာသီမှာတော့ ကြံ့ခိုင်မှုအရ ပြဿနာရှိလာနိုင်တဲ့ အသက် ၃၇ နှစ်သားကြီး သီယာဂို ဆေးလ်ဗားနေရာကို ကမ္ဘာ့အဆင့် ဗဟိုနောက်ခံလူတစ်ဦးနဲ့ ဖြည့်တင်းဖို့ အဓိက လိုအပ်နေပါတယ်။
ဆီဗီလာကစားသမား ဂျူးလ် ကွန်ဒီကို ပေါင်သန်း ၅၀ နဲ့ သဘောတူညီမှုရယူဖို့ ​ကြိုးစားနေတာက အချိန်မနှောင်းခင် ကိစ္စအဝဝ ပြီးစီးဖို့ လိုနေပြီး ရာသီသစ် အစီအစဉ်မှာ အမြန်ဆုံး ပူးပေါင်းခိုင်းဖို့ တွန်းယူရပါဦးမယ်။ ဟာလန်းကို လိုက်နေရလို့ လမ်းပျောက်ပြီး ဒီအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်မလာရင်တော့ တူဟယ်လ်တစ်ယောက် ရင်ခံစရာ အခြေအနေတချို့ကို မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ရလိမ့်ဆိုတာ သိရှိထားပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မလိုတဲ့ ကစားသမားတွေ ရှင်းထုတ်ရမယ်
ဒီစာရင်းမှာတော့ အသင်းမှာ ပွဲမထွက်တော့တာ ၃ နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဒန်နီ ဒရင့်ခ်ဝါးတား၊ တီးမူး ဘာကာယိုကို၊ ဒါဗီဒေး ဇက်ပါကော်စတာတို့နဲ့အတူ လူးဝစ္စ ဘေကာ၊ မတ် မီယာ့ဇ်ဂါ၊ ဂျိတ်ခ် ကလာ့ခ်-ဆော်လ်တာတို့ကို ရှင်းထုတ်ရင်း လစာဖောင်းပွမှုကို လျှော့ချပြီး လူသစ်ဝယ်ဖို့ ငွေရှာသွားရမှာဖြစ်သလို အငှားကနေ ပြန်ပူးပေါင်းလာတဲ့ ရော့စ် ဘာကလီနဲ့ ရူဘင် လော့ဖ်တပ်စ်ချိခ်တို့ကို နေရာပေးသွားဖို့ ရှိမလားဆိုတာတော့ တစ်ချက်ကြည့်ရဦးမှာပါ။
တူဟယ်လ် ဖြေရှင်းဖို့ ကျန်နေသေးတာက တိုက်စစ်ပုစ္ဆာပါ။ အဆုံးသတ်ပိုင်း ညံ့ဖျင်းလွန်းတာကို အဖြေရှာရပါဦးမယ်။ ခိုင်ဟာဗတ်ဇ်က ဂိုးသွင်းခြေရလာပြီမို့ စိတ်အေးစရာတစ်ခု ရှိလာပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပင်နယ်တီ ၇ ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ ဂျော်ဂျင်ဟိုက ဂိုးသွင်းအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာကတော့ လက်ခံနိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ အထောင်တိုက်စစ်မှူးသစ်ကို မဖြစ်မနေ ဝယ်ယူရမှာဖြစ်သလို လက်ရှိမှာ ဟာလန်းနဲ့ သတင်းငြိမ်သွားပြီး ရိုမီလူ လူကာကူးနဲ့ သတင်းမွှေးလာတာကိုတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားရပါမယ်။
ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှာတဲ့လဲ? ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက တူဟယ်လ်က ပက်ပ် ဂွါဒီယိုလာကို ၃ ပွဲစလုံး အရှက်ခွဲပြီး ဖြိုချပြခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် စီးတီးတို့လက်ထဲက ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို ပြန်လုဖို့ကတော့ ဂျက်ခ် ဂရီးလစ်ရ်ှနဲ့ ဟာရီကိန်းတို့ ပူးပေါင်းလာနိုင်တဲ့ လူအင်အားအရ အတော်လေး ခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာ လက်ရှိ ချဲလ်ဆီး လူစာရင်းက ခြေတစ်လှမ်း နောက်ကျနေတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
သူ့အနေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ရယူအပြီးမှာ မန်စီးတီးနဲ့ ခြေအဆင့်အတန်းချင်း ကွာဟမှုကို အမီလိုက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ ဗာနာ+ခိုင်ဟာဗတ်ဇ် ဂျာမန်အတွဲက ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားနဲ့ အရှိန်ကောင်းကို ရနေပေမယ့် တဖက်မှာ မန်ယူနိုက်တက်၊ လီဗာပူးလ်တို့ကလည်း အပြိုင်အဆိုင် အားထည့်လာမှာဖြစ်လို့ အေဘရာဟမ်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အသုံးချသွားနိုင်မလဲ ဒါမှမဟုတ် တူဟယ်လ်အနေနဲ့ မာရီနာတို့ရဲ့ လူသစ်ခေါ်ယူမှုကိုသာ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဆက်လက်စောင့်မျှော်သွားတော့မယ်လို့ အတွေးပွားမိကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
6 Aug နံနကျခငျး နောကျဆုံးရ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျသတငျးမြား စုစညျးမှု